HGH ပတ္တရား - ansomone ကြီးထွားဟော်မုန်းကိုဝယ်ယူပြီးနောက်сustomerတုံ့ပြန်ချက်
HGH ထိုင်းနိုင်ငံက ဇူလိုင်လ 16, 2017
- နေ client နှင့်အတူအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး
- 800IU Ansomon HGH မှပတ္တရားအနေဖြင့်ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းအဘို့အမိန့်ရရှိထားသည့်
- ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုလျှော့ခြင်းနှင့်အမိန့်အဘို့အပြည့်အဝပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိ
- အလွန်ကောင်းသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ရိုးရိုးသားသားဆိုင်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦး 8 packages များနှင့်အတူအမိန့်, စတိုးဆိုင်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောလျှော့စျေးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ပိုက်ဆံပို့ပေးရန်အနည်းငယ်ကြောက်လန့်။ ဒါပေမယ့်စကားပြောဆိုမှုအပြီးကျွန်တော်စတိုးဆိုင်၏ဘဏ်အကောင့်မှငွေကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ အမိန့်3ရက်အတွင်းလက်ခံရရှိ! အကောင်းနဲ့ရိုးသားစတိုးဆိုင်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
, ရိုးသားစတိုးဆိုင်အကြံပြုပါသည်။ ကြေးဇူးတငျစကား
Tommy ဇူလိုင်လ 16, 2017